Fanakarontanana : Handray andraikitra ny governemanta -
AccueilRaharaham-pirenenaFanakarontanana : Handray andraikitra ny governemanta
Na dia tsy nivantana aza androany ny praiministra Mahafaly Olivier Solonandrasana manoloana ny hetsika izay nitranga ny sabotsy teo. Dia hentitra ny fanambarana notanterahin’ny praiministra «tokony hiara- hientana sy hieritreritra ny rehetra tsy ho voakarontana sy hametraka ny fandriampahalemana, ary manoloana ny fanakorontanana dia hijoro ny governemanta ». Fihoaram-pefy iniana atao tokoa ny fanakorontanana misy eto amin’ny firenena amin’ izao fotoana izao ary rariny raha mandray ny andraikitra mifanandrify aminy ny fitondram-panjakana sy ny governemanta. Zary lasa toa mieboebo amin’ny asa fanakorontanana ataony tokoa ireo mpanakorontana amin’ izao fotoana izao. Izy ireny anefa dia fantatra fa manana raharaha eny anivon’ny fitsarana, saingy mbola mitsapa ny halalin’ny rano ihany. Raha ny fahitana ny endriky ny praiministra androany ny fahatezerana, ary ho sarotra ny miandry ireo mpanao ny asa fanakorontanana rehetra indrindra ireo minia manao izany .
Raha mbola misy ny korontana dia sarotra ny fampandrosoana ny firenena, hoy ny praiministra Solonandrasana Olivier androany. Ankehitriny tokoa mantsy dia efa mizotra mankany amin’ny fanarenana maharitra ny firenena ny mpitondra, ary tsy mijery afa- tsy ny tombontsoan’ny vahoaka malagasy. Ny fisiana disadisa sy ny korontana dia tsy ahafahana manatanteraka ny tetikasa izay efa voafaritra, indrindra eo amin’ny lafiny ara toekarena. Tsiahivina, ohatra, ny zava- nitranga ny sabotsy teo raha toekarena no resahina, satria voatery nikatona ireo tsena ary nahitana fatiantoka hatrany amin’ny 1 miliara Ariary mahery izany. Tsy misy ilana fanakorontanana intsony tokoa raha io antontan’isa no jerena, satria tsiahivina fa efa misokatra ho an’ny rehetra amin’ny fifampiresahana izao ny governemanta. Ho an’ny praiministra dia mazava ny nambarany manoloana ny zava- mitranga eto amin’ny firenena « Miasa i Madagasikara amin’ izao satria mila misitraka an’ izany fampandrosoana izany ny Malagasy ». Tsotra ny nambarany ity lohalaharan’ny governemanta ity manoloana ny lafiny fanakorontanana sy fampandrosoana « ilana fitoniana ny hahatongavana amin’ny fampandrosoana mipaka any amin’ny vahoaka, ny andrasana amin’ny olom-pirenena sy ny mpanao politika dia ny fitoniana maharitra ». Mazava tamin’ny alalan’io resaka nataon’ny praiministra io fa tsy mila ady ny fitondram-panjakana ary tsy mitady ankoatra ny hahatsara ny fiainan’ny vahoaka malagasy.